आन्टीहरूलाई खुलापत्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
केटी मान्छेलाई तारिफ गरेर उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच तपाईंका श्रीमान्जस्ता कैयौँ अनजान अंकलहरूको होला तर मजस्ता हजारौँ केटीलाई त्यस्ता सन्देशहरू ‘प्रशंसात्मक दुर्व्यवहार’ मात्र लाग्छन् ।
कार्तिक ५, २०७७ लीना दुवाडी
डियर आन्टी !
आरामै छु, अनि तपाईंले पनि यो कोरोनाकालमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरिरहनुभएको होला भन्ने कामना गर्छु ।
कोरोनाको कहरमा तपाईंलाई गुनासोयुक्त पत्र लेख्न रहर त थिएन । यद्यपि मैले जेजस्ता कुराहरू अवगत गराउने मनसायले यो बेतारे युगमा पनि हुलाकी युगकै जस्तो पत्र कोर्न लागेकी छु, त्यसको कारण पनि कोरोना भाइरस नै रहेको मेरो अन्तरात्माले भनिरहेको छ । अनि आशा छ– तपाईंले झिँजो नमानी यो पत्र आद्योपान्त पढेर मनन गर्नुहुनेछ । कुरा गएको महिनाको हो । सूर्यास्तको केही घण्टा मात्र भएको थियो । म आफ्नै कोठामा ल्यापटप खोलेर काम गर्दै थिएँ । यहाँको समयानुसार रातको नौ बजेको थियो । नेपालमा लगभग बिहानको आठ बज्दै थियो । फेसबुकमा म्यासेजको घण्टी बज्यो ।
सायद तपाईंका श्रीमान्ले बिहान उठेर चिया पिउँदै सोसल मिडियामा आफ्नो ड्युटी सुरु गर्नुभएको थियो । ‘नमस्ते, गुड मार्निङ’ लेखेर पठाइएको त्यो म्यासेजलाई मैले बेवास्ता गरेँ । तपाईंले सोच्नुभयो होला, किन ? किनकि तपाईंका श्रीमान् मेरा साथी, आफन्त वा नजिकको चिनजानका व्यक्ति होइनन् । र, तपाईंका श्रीमान्ले हरेक बिहान मलाई त्यसरी फेसबुक सन्देश पठाउने गरेको त्यो पहिलो पनि थिएन । एक दिन उहाँले मलाई लेख्नुभयो, ‘तपाईंको पछिल्लो आर्टिकल पढेँ, धेरै राम्रो छ ।’ मैले धन्यवाद फर्काएँ । लगत्तै अर्को म्यासेज आयो, ‘के गर्दै हुनुहुन्छ ?’
त्यो प्रश्नलाई मैले ‘इग्नोर’ गरेँ किनकि मलाई त्यो असान्दर्भिक र अनावश्यक लाग्यो । अर्को दिन उस्तै समयतिर मेरो फेसबुक नोटिफिकेसन बज्यो, ‘नमस्ते ! आरामै हुनुहुन्छ ?’ तपाईंकै श्रीमान्को प्रश्न थियो, जसलाई मैले फेरि ‘इग्नोर’ गरेँ किनकि त्यो मेरा लागि बेमतलबको प्रश्न थियो । त्यसको केही दिनपछि उहाँले मलाई एउटा फोटो पठाउनुभयो । मैले खोलेर हेरेँ, मेरो प्रोफाइल पिक्चरको स्क्रिनसट लिइएको रहेछ र साथमा लेखिएको थियो, ‘सो ब्युटिफुल’ । मलाई त्यो कत्ति पनि मन परेन । केटी मान्छेलाई तारिफ गरेर उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच तपाईंका श्रीमान्जस्ता कैयौँ अनजान अंकलहरूको होला तर मजस्ता हजारौँ केटीलाई त्यस्ता सन्देशहरू ‘प्रशंसात्मक दुर्व्यवहार’ मात्र लाग्छन् ।
कसैको प्रोफाइल खोलेर एकएक फोटो कुन कस्तो छ भनेर हेरिरहने तपाईंका श्रीमान् पक्कै पनि निकै फुर्सदमा हुनुहुन्छ । मलाई कुतूहल लाग्यो । यसरी दैनिक सोसल मिडियामा मलाई ‘स्टक’ गर्ने को रहेछ भनी प्रोफाइल खोलेर हेरेँ । नेपालको सरकारी जागिरे र राम्रै ओहोदामा हुनुहुँदो रहेछ । उमेरका हिसाबले मैले उहाँलाई अंकल र तपाईंलाई आन्टी सम्बोधन गरेकी हुँ । म अनुमान गर्दै थिएँ– हरेक बिहान परिवारमा सबैभन्दा छिटो उठेर तपाईं भान्साको काममा लाग्नुहुन्छ । तपाईंलाई श्रीमान् उठ्नुअघि नै उहाँका लागि चिया र खाजा तयार पार्ने चटारो हुन्छ । सधैँ घरधन्दामा व्यस्त हुँदा तपाईंलाई सायद उहाँको दैनिकी कसरी बित्छ र उहाँ इन्टरनेटमा के–के गर्नुहुन्छ भन्ने कुनै ‘क्लु’ छैन ।
तपाईंले विश्वास गरेर उहाँको फोन पनि कहिल्यै ‘चेक’ गर्नु हुन्न । कसैको ‘प्राइभेसी’ लाई सम्मान गर्नु राम्रो कुरा हो तर कतै तपाईंले उहाँलाई आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास गरिरहनुभएको त छैन ? तपाईंले आफ्नो इमेल, फेसबुक लगायतका इन्टरनेट अकाउन्टहरूका पासवर्ड उहाँसँग सेयर गर्नुभएको छ ? पक्कै होला । तर के उहाँले आफ्ना सबै पासवर्ड तपाईंसँग सेयर गर्नुभएको छ ? के उहाँ आफ्ना दैनिक रुटिन कुराहरू तपाईंसँग साझा गर्नुहुन्छ ? के तपाईंहरूबीच साथीजस्तो सम्बन्ध छ ? हाम्रोजस्तो समाजमा श्रीमती भनेको परिवारको निर्माण र घर सम्हाल्नका लागि मात्रै हो भन्ने मानसिकताले तपाईंजस्ता थुप्रै महिलालाई आफ्नो घरका चार भित्ताबाट बाहिर उम्कन दिएको छैन ।
विकासका कुरामा हामी जति अगाडि बढे पनि यस्ता रूढिवादी सोचले निम्त्याएका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । कोरोना भाइरसका कारण अहिले आवश्यकताभन्दा बढी फुर्सदमा हुने तपाईंका श्रीमान्जस्ता धेरैले इन्टरनेटले देखाएका लोभलाग्दा सुविधाहरू राम्रैसँग प्रयोग गरिरहेका छन् । माथि मैले ‘प्रशंसात्मक दुर्व्यवहार’ को प्रसंग उल्लेख गरेँ । यसमा केही थप कुरा गर्न मन लाग्यो । केही समयअगाडि नेपालका चर्चित नायकविरुद्ध केही महिलाले आवाज उठाए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक वरिष्ठ प्राध्यापकविरुद्ध केही महिला विद्यार्थीले गरेको उजुरीले ‘हर्रास्मेन्ट’ अर्थात् उत्पीडनका कैयौँ प्रकार हुन्छन् र यो कुनै जात, उमेर वा वर्गविशेषको कुरा नभई एउटा अल्प मानसिकताको उपज हो भन्ने जनाउँछ । ती दुवै अक्षम्य अपराध थिए, जसको सुरुआत ‘प्रशंसात्मक दुर्व्यवहार’ बाटै भएको थियो । तपाईंका श्रीमान् कतै त्यस्तै मानसिकताको सिकार बन्दै गइरहनुभएको त छैन ?
एकपटक फेसबुकमार्फत मेरी एक साथीले एक व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिन् । पेसाले चलचित्र निर्माणको काम गर्ने ती व्यक्तिले आफ्नो भर्खरै डिभोर्स भएको र एक्लै भएको भनेर मित्रता जोडेका थिए । हरेक दिन फेसबुकमा उनीहरूको घण्टौँ कुराकानी हुन्थ्यो । मित्रता बिस्तारै प्रेमी–प्रेमिकाको सम्बन्धतर्फ ढल्दै जाँदा एक दिन अचानक मेरी साथीलाई फेसबुकमार्फत नै थाहा भयो, ती व्यक्तिले त झुट बोलेर मित्रता गाँसेका रहेछन् । तिनको सम्बन्धविच्छेद त भएकै रहेनछ । ती मानिसले एकसाथ दुई महिलालाई धोका दिइरहेका थिए ।
कुनै ठूलै कदम नचाले पनि अहिलेका ४०/४५ काटेका पुरुषहरू सोसल मिडियामा टाइमपास गर्न घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर गफ गर्ने साथीको खोजीमा भइरहेका हुन्छन् । तपाईंका श्रीमान् कहीँ तिनैमध्ये एकमा त पर्नुहुन्न ? आन्टी ! मैले तपाईंलाई आज यसरी पत्र लेख्नुको कारण अर्को पनि छ । घर, परिवार, श्रीमान् भन्दाभन्दै कतै तपाईंले आफ्नो जीवन जिउन नै बिर्सिरहनुभएको त छैन ? आफ्ना इच्छा–आकांक्षालाई मारेर बसिरहनुभएको त छैन ? कुरैकुरामा उहाँले ‘भयो, छाडिदे, तैँले गर्न सक्ने कुरा होइन यो’ भनेर तपाईंको सम्मानको खिल्ली उडाउँदा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएर बस्नुभएको त छैन ? तपाईंले उहाँबारे केही कुरा जान्न खोज्दा उहाँले ‘तेरो मतलबको कुरा होइन यो’ भन्दा तपाईं चुप लागेर बस्ने गर्नुभएको त छैन ?
तपाईंका श्रीमान्ले आफ्नो मर्जीअनुसार जे गरे पनि हुने, तपाईंले आफूलाई मन लागेका कुराहरू आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर गर्न किन नहुने ? दिनमा एकाध घण्टा समय तपाईं आफ्ना लागि छुट्याउनुस्, आफ्ना लागि केही लक्ष्य निर्धारण गर्नुस् । कहिलेकाहीँ एकान्तमा बसेर विचार गर्नुस्– परिवारका साथसाथै तपाईं आफ्ना लागि पनि बाँचिरहनुभएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस् । आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा श्रीमान्का अगाडि खुलेर भन्नुस् । अनि श्रीमान्को ‘प्राइभेसी’ को सम्मान गर्दै कहिलेकाहीँ चिया दिन जाँदा बिहानबिहानै उठेर आफ्ना श्रीमान्ले आफ्नै छोरी उमेरका केटीहरूलाई ‘प्रशंसात्मक दुर्व्यवहार त गरिरहेका छैनन् ?’ भनी यसो चियो पनि गर्ने गर्नुस् ।
त्यसले तपाईंलाई श्रीमान् गलत बाटामा रहेछन् भने उनलाई सम्झाउने, बुझाउने र अझ घुर्क्याउनेसम्मको अवसर दिनेछ । यी सुझावलाई तपाईंकी छोरीको उमेरकी एउटी भतिजीले दिएको भन्ठानेर तपाईंले गम्भीरताका साथ लिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । जसरी तपाईंका श्रीमान्ले मलाई ‘प्रशंसात्मक दुर्व्यवहार’ गर्न खोज्नुभयो, के थाहा कतै तपाईंकी छोरीलाई अर्को कुनै अंकल उमेरको व्यक्तिले त्यस्तै पो गर्ने प्रयास गर्दै छ कि ?
आन्टी, तपाईंप्रति मेरो सहानुभूति र साथ दुवै छ । आफ्नो ख्याल राख्नुहोला ।
उही तपाईंकी शुभचिन्तक !
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:४५
'यो महामारीको अवस्थामा कतिपय निर्माणका काम रोक्नुपर्‍यो । नगरी नहुने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । नगर्दा पनि हुने कुरालाई अहिले रोक्नुपर्‍यो तर नागरिकलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्छ ।'
सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्‍यो, यसले मलाई असाध्यै दुःखी र निराश बनायो । अरू खर्चलाई कटौती गर्ने ठाउँ जति पनि छन् । कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर सरकारले १२/१४ अर्ब खर्च भएको हिसाब पनि देखाएको थियो । त्यत्रो ठूलो रकम खर्च गर्नभन्दा त नागरिकको व्यवस्थापन गरेको भए हुन्थ्यो, अझै पनि गर्दा हुन्छ । जनताको हालत भन्ने हो भने निम्नमध्यम वर्गको त कुरै छोड्नुस्, मध्यम वर्गको पनि बिजोग छ, पीडा छ, बेहाल छ । विद्यार्थी, रोजगारी खोज्दै हिँड्नेहरू, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको बिजोग छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:२६